पर्याप्त नसुत्दा देखिन्छन् गम्भीर समस्या, उमेर अनुसार कति सुत्ने थाहापाइराख्नुस् ! – NepalajaMedia
काठमाडौँ। मानव शरिरलाई पनि विभिन्न इएन्जिनहरुजडान गरेर बनाइएको मेसिनहरुसँग तुलना गर्न सकिन्छ । मेसिनरि सामानहरु जति धेरै प्रयोग गर्यो त्यति नै त्यसकै छिटो बिग्रन सक्ने हुन्छ । त्यस्तै मानव शरिर पनि कुनै मेसिनरि चिज भन्दा फरक छैन् । जति धेरै काम गर्यो त्यतिकै मात्रामा शरिरलाई आराम दिनु पर्छ । दिनभर काम गरेर थकित भएको शरिरलाई उर्जा दिनको लागि सुत्नु पर्ने हुन्छ ।
Prevफेरि पनि युद्ध हुन सक्ने प्रचण्डको चेतावनी !
कालिकास्थानस्थित एनआइसी एशिया बैंकको एटिएम बुथ फुटाउँदै गरेका तीन पक्राउ